I-Shepherd's Hut & WoodFired HotTub in The Cotswolds - I-Airbnb
I-Shepherd's Hut & WoodFired HotTub in The Cotswolds
Dixton, England, i-United Kingdom
Iqhugwane likamalusi ibungazwe ngu-Alice
U-Alice Ungumbungazi ovelele
Indlu yabelusi ethokomele ebekwe kahle enobhavu oshisayo oshiswe ngokhuni lwaseSweden esendaweni yase-Cotswolds yobuhle Bemvelo Obuvelele. Iqhugwane libekwe engadini yangasese, onqenqemeni lwamasimu anokubukwa okuningi kokushona kwelanga. Indawo enhle yokuphumula nokuphumula ezweni elizungezwe amasimu, izilwane zasendle kanye nothango lwasendulo. Isitofu esivuthayo sogodo sigcina iqhugwane lipholile futhi lifudumele. Indawo yokuhlala evulekile enepulani enekhishi elihlome ngokuphelele. Igumbi lokugezela elineshawa. I-Gas BBQ yokupheka kwe-alfresco.
Iqhugwane linobuciko boqobo kanye nokuhlobisa kwesitayela sokuhlala sesifunda. Ubhavu oshisayo uphumule ngendlela emangalisayo ngokubuka okunabile ngasekushoneni kwelanga kanye nenyanga nezinkanyezi ngobusuku obucwathile. Izibani zezinganekwane nazo zidala indawo ezungezile enomlingo. Zonke izinkuni ozidingayo zomshini wokushisa izingodo zasendlini kanye nobhavu oshisayo zifakiwe enanini.
Kuhlinzekwa izingubo zokulala namathawula. Sincoma ukuthi ulethe ama-flip-flops obhavu oshisayo kanye nengubo yokugezela yokuzizwa okufana ne-spa! Igumbi lokugezela lineshawa, indlu yangasese eshaywayo kanye nesitimela sethawula elishisayo. Kuneshalofu elikhulu lokugcina impahla ngaphansi kombhede kanye namahhuku amaningi okulenga izingubo.
Ngicela n.b. umbhede unosayizi omncane othokomele: 120cm x 190cm / 4' x 6'3”
Ikhishi linosinki waseBelfast nakho konke okudingayo ukuze upheke ukudla okumnandi: isiqandisi, izinti zokungeniswa endlini ezingu-2, amasoso, ipani lokuthosa, izitsha eziningi, izinto zokusika, izibuko, iketela, i-toaster kanye nekhefi (sicela ubone isithombe sasekhishini).
Ukhuni oluqinile lwe-Chestnut ngaphandle kwedekhi lubonisa indawo eningi yokuphumula enezihlalo zamadekhi, izihlalo zabaqondisi kanye netafula. Umthunzi uhlinzekwa yiqhugwana uqobo.
Kukhona i-TV (edlala ama-DVD kuphela) futhi ayikho i-Wifi endaweni (nakuba kuvame ukuba nesiginali yeselula ye-4G enhle). Jabulela ukucula kwezinyoni futhi ubuyele emvelweni!
4.94 · 110 okushiwo abanye
Kunokuningi kokuhamba okubukekayo okuvela emnyango, okuhlanganisa iGloucestershire Way kanye neWinchcombe Way National trails, kanye nezinye izindlela eziningi zezinyawo ongazihlola. Lokhu kuhamba, okuningi okunokubukwa okuhle, kuzokuyisa endaweni ehlukahlukene yasemapulazini nasezihlahleni, ezinohambo olude oluya e-moorland-like Cleeve Common for the adventurous more!
Indawo yokudlela yaseRoyal Oak ethokozisayo enokudla okuhle iyi-6min drive noma uhambo oluyihora eli-1.
Idolobhana laseCotswold eliseBroadway kanye nedolobhana laseCheltenham zombili ezinokhetho oluhle lwezitolo, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ziwuhambo oluyi-20min. Ukuqhubekela phambili nesitolo esihle se-Daylesford Organic Farm Shop, i-Spa kanye neretshurenti ibukeka kahle ngemizuzu engama-35 ngokushayela emigwaqweni ebukekayo yaseCotswold.
Ngihlala kwamakhelwane futhi ngingathintwa ngocingo/imiyalezo ye-airbnb.
Hlola ezinye izinketho ezise- Dixton namaphethelo